ဝူ ဟန်နောက်ကွယ် က ရှုပ်ထွေး မှု ” ဝူဟန် ဗိုင်းရပ် စ်မွေးထုတ်ပေးသူ” – Shwewiki.com
ဝူ ဟန်နောက်ကွယ် က ရှုပ်ထွေး မှု ” ဝူဟန် ဗိုင်းရပ် စ်မွေးထုတ်ပေးသူ”
ဝူ ဟန်နောက်ကွယ်က ရှုပ်ထွေးမှု ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်မွေးထုတ်ပေးသူ” ဟားဗက်ဇီဝသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် တရုတ်အပေါင်းအပါ တရားခံတွေ အဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီ ….. ။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဟားဗက်ဇီဝသိပ္ပံပညာရှင် လိုင်ဘာကို တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့်အတူ အမေရိကန် အက်ဖ်ဘီအိုင်က တပ်ဖွဲ့က (၂၈)ရက်နေ့ကဘဲ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီ။ ဖမ်းဆီးရခြင်းအကြောင်းကတော့ ပရော်ဖက်ဆာ လိုင်ဘာဟာ ဝူဟန်ဇီဝနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆီကတရားမဝင်ငွေကြေးလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းတာပါ။ တရားစီရင်မယ့် တရားသူကြီးနာမည်ကတော့ Marianne B. Bowler ပါ … ။
တရုတ်ဘက်က လိုင်ဘာကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ပေးတဲ့အပြင် နေစရိတ်စားရိတ် ဒေါ်လာ ၁၅၈၀၀၀ ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ အက်ဖ်ဘီအိုင်က ကစုံစမ်းရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတည်ဆောက်ပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၅)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ် .. ။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရှိဓာတုဗေဒနှင့်ဓာတုဇီဝဗေဒဌာန၏ဥက္ကဌဒေါက်တာချားလ်စ်လစ်ဘာသည်ယနေ့နံနက်တွင်အဖမ်းခံရပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းသော၊ လီဘာသည်ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘော်စတွန်ရှိဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်တရားသူကြီးတရားသူကြီး Marianne B. Bowler ရှေ့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် … ။
ဝူဟန်မှာ တည်​ဆောက်ထားတဲ့ ဇီဝစမ်းသပ်ခန်းဟာဟာ မေရိကန်ဆီက အချက်အလက်တွေ တရားမဝင် ခိုးယူ ည်ဆောက်ထားတယ်လို့ အက်ဖ်ဘီအိုင်ကက သံသယ ရှိနေတာ တာကြာပါပြီ.။ တရုတ်ထောက်ပံကြေးယူထားတဲ့ လိုင်ဘာဟာ အမေရိကန်ကဒေတာတွေကို တရုတ်ဆီ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ နာနိုနည်းပညာကို ရူးသွပ်ပြီး ၂၀၁၁ တုန်းက မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ “ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးပွားခြင်း”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် …. ။
ဟန်က တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြေဆေးမရလို့ အ​မေရိကန်ကို အကူအညီလှမ်းတောင်းတာတွေ၊ ဝိုင်ဘာဆီလှမ်းပြီး မင်းတို့လုပ်ထားတာတွေ လာရှင်းဆိုပြီး ပြောဆိုသံတွေကို အက်ဖ်ဘီအိုင်ကက စုံစမ်းရရှိထားပါတယ် …. ။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို လူလုပ်ဗိုင်းရပ်။ ဇီဝလက်နက်လို့ အမေရိကန်ဘက်ကယုံကြည်နေပါတယ်။ လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ဘက်က စုံစမ်းမှုတွေ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေပါပြီ … ။
သုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ပြောရရင် အမေရိကန်ဆီက တရုတ်က နည်းပညာခိုးပုံ ရပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတော့ အက်ဖ်ဘီအိုင်ကလည်း သတိမပြုမိဘူးထင်ပါတယ် …. ။
ခုမှ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျိုးစိတ်တွေ၊ နည်းပညာတွေ တရုတ်ဆီရောက်မှန်းသိတာပါ။ တရုတ်ဘက်က နည်းပညာအပြည့်အဝ ရခဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့စောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေမှာ အားနည်းချက်ရှိပုံရပါတယ်။ လိုင်ဘာကို လှမ်းပြီး ဖြေဆေး ရှာခိုင်းတာထင်ပါတယ်။ ခု လိုင်ဘာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်လို့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ မသိသေးပါဘူးနေိာ် … ။
ယခုသတင်းသည် iTech Media မှ ဟားဗက်တက္ကသိုလ်ပိုင်အစိုးရဝဘ်ဆိုက်မှ ရရှိသောသတင်းမှန်အား ဘာသာပြန် တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည် … ။
ဝူဟနျနောကျကှယျက ရှုပျထှေးမှု ” ဝူဟနျ ဗိုငျးရပျဈမှေးထုတျပေးသူ”
ဝူဟနျနောကျကှယျက ရှုပျထှေးမှု ဝူဟနျ ဗိုငျးရပျဈမှေးထုတျပေးသူ” ဟားဗကျဇီဝသိပ်ပံပညာရှငျနှငျ့ တရုတျအပေါငျးအပါ တရားခံတှေ အဖမျးခံလိုကျရပါပွီ ….. ။
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈနဲ့ ဆကျနှယျပွီး ဟားဗကျဇီဝသိပ်ပံပညာရှငျ လိုငျဘာကို တရုတျနိုငျငံသားနှဈဦးနှငျ့အတူ အမရေိကနျ အကျဖျဘီအိုငျက တပျဖှဲ့က (၂၈)ရကျနကေ့ဘဲ ဖမျးဆီးလိုကျပါပွီ။ ဖမျးဆီးရခွငျးအကွောငျးကတော့ ပရျောဖကျဆာ လိုငျဘာဟာ ဝူဟနျဇီဝနညျးပညာတက်ကသိုလျဆီကတရားမဝငျငှကွေေးလကျခံခဲ့တယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ ဖမျးတာပါ။ တရားစီရငျမယျ့ တရားသူကွီးနာမညျကတော့ Marianne B. Bowler ပါ … ။
တရုတျဘကျက လိုငျဘာကို တဈလ ဒျေါလာ ၅၀၀၀၀ ပေးတဲ့အပွငျ နစေရိတျစားရိတျ ဒျေါလာ ၁၅၈၀၀၀ ထောကျပံ့ပေးထားတယျလို့ အကျဖျဘီအိုငျက ကစုံစမျးရရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ တရုတျနိုငျငံတှငျ ဓါတျခှဲစမျးသပျခနျးတညျဆောကျပေးရနျ အမရေိကနျဒျေါလာ (၁.၅)သနျး ထောကျပံ့ပေးခဲ့တယျလို့ စုံစမျးသိရှိရပါတယျ .. ။
ဟားဗတျတက်ကသိုလျရှိဓာတုဗဒေနှငျ့ဓာတုဇီဝဗဒေဌာန၏ဥက်ကဌဒေါကျတာခြားလျဈလဈဘာသညျယနနေံ့နကျတှငျအဖမျးခံရပွီးရုပျပိုငျးဆိုငျရာမှားယှငျးသော၊ လီဘာသညျယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ဘျောစတှနျရှိဖကျဒရယျတရားရုံးတှငျတရားသူကွီးတရားသူကွီး Marianne B. Bowler ရှတှေ့ငျပျေါလာလိမျ့မညျ … ။
ဝူဟနျမှာ တညျ​ဆောကျထားတဲ့ ဇီဝစမျးသပျခနျးဟာဟာ မရေိကနျဆီက အခကျြအလကျတှေ တရားမဝငျ ခိုးယူ ညျဆောကျထားတယျလို့ အကျဖျဘီအိုငျကက သံသယ ရှိနတော တာကွာပါပွီ.။ တရုတျထောကျပံကွေးယူထားတဲ့ လိုငျဘာဟာ အမရေိကနျကဒတောတှကေို တရုတျဆီ ပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ နာနိုနညျးပညာကို ရူးသှပျပွီး ၂၀၁၁ တုနျးက မဂ်ဂဇငျးတဈခုမှာ “ဗိုငျးရပျဈမြိုးပှားခွငျး”ဆိုတဲ့ ဆောငျးပါးတဈခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယျ …. ။
ဟနျက တရုတျသိပ်ပံပညာရှငျတှေ ဗိုငျးရပျဈဖွဆေေးမရလို့ အ​မရေိကနျကို အကူအညီလှမျးတောငျးတာတှေ၊ ဝိုငျဘာဆီလှမျးပွီး မငျးတို့လုပျထားတာတှေ လာရှငျးဆိုပွီး ပွောဆိုသံတှကေို အကျဖျဘီအိုငျကက စုံစမျးရရှိထားပါတယျ …. ။
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈကို လူလုပျဗိုငျးရပျ။ ဇီဝလကျနကျလို့ အမရေိကနျဘကျကယုံကွညျနပေါတယျ။ လကျရှိပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီး အမရေိကနျဘကျက စုံစမျးမှုတှေ ဆကျလကျလုပျ ဆောငျနပေါပွီ … ။
သုံးသပျခကျြအနနေဲ့ပွောရရငျ အမရေိကနျဆီက တရုတျက နညျးပညာခိုးပုံ ရပါတယျ။ ပညာရှငျတှရေဲ့ ပုံမှနျဆကျဆံရေးဆိုတော့ အကျဖျဘီအိုငျကလညျး သတိမပွုမိဘူးထငျပါတယျ …. ။
ခုမှ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျတဲ့ မြိုးစိတျတှေ၊ နညျးပညာတှေ တရုတျဆီရောကျမှနျးသိတာပါ။ တရုတျဘကျက နညျးပညာအပွညျ့အဝ ရခဲ့ပုံမပျေါဘူး။ ဗိုငျးရပျဈထိနျးခြုပျမှုနဲ့စောငျ့ကွညျ့မှုဆိုငျရာ အခကျြအလကျတှမှော အားနညျးခကျြရှိပုံရပါတယျ။ လိုငျဘာကို လှမျးပွီး ဖွဆေေး ရှာခိုငျးတာထငျပါတယျ။ ခု လိုငျဘာကို ထိနျးသိမျးလိုကျလို့ ဘာဆကျဖွဈမလဲ မသိသေးပါဘူးနျေိာ … ။
ယခုသတငျးသညျ iTech Media မှ ဟားဗကျတက်ကသိုလျပိုငျအစိုးရဝဘျဆိုကျမှ ရရှိသောသတငျးမှနျအား ဘာသာပွနျ တငျပွခွငျး ဖွဈပါသညျ … ။
ပြင်သစ်အစိုးရ က လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ပြန်ခေါ် ခဲ့သော်လည်း ဝူဟန်မြို့မှာ ပဲ ဆက်နေခဲ့ တဲ့ ပြင်သစ်ဆရာဝန်
မ လှုနိုင် ရင်တောင် မှ ကိုရ င်လေးအတွက် သာသနာေ တ်ာအတွက် ရှယ်ပေးကြပါအူး